N'oge na-adịbeghị anya: Mepụta na-akpaghị aka, Kwalite ma Kesaa Mmelite Mgbasa Ozi N'iji AI na Ọdịnaya dịnụ | Martech Zone
Nnukwu mmemme mgbasa ozi mmekọrịta na-amalite site na ọdịnaya dị mkpụmkpụ nke ị nwere ike ịfụfe na ọwa gị niile ma mee ka onye ọ bụla nọ na ụlọ ọrụ gị kọwaa. Mfe ime otu ugboro, ugboro abụọ, ọbụna ugboro atọ. Ma ọtụtụ narị na ọtụtụ puku ugboro? Nke ahụ bụ ebe ọgụgụ isi na-elekọta mmadụ na-adịbeghị anya na-enye gị mmụba site na ịtụgharị ọdịnaya ọ bụla nke longform n'ime ìgwè mgbasa ozi mgbasa ozi iji bulie mmemme mmemme gị.
N'oge na-adịbeghị anya Artificial Social Intelligence Platform Gụnyere
AI Ọdee Akwụkwọ - already tinyeworị ego na ọdịnaya dị elu nke dabara na vidiyo, pọdkastị, na akwụkwọ ederede ogologo oge. Onye na-ede akwụkwọ ọdịnaya nke oge na-adịbeghị anya ga-etinye ọdịnaya ọ bụla dị ogologo ma nye gị ọtụtụ ìgwè nke akwụkwọ mgbasa ozi ọhụụ ọhụrụ a nwalere maka ị nyochaa na iri nri na mmemme mgbasa ozi gị.
Social Media Marketing - Ozugbo ikpeazụ AI Ederede Ederede Software ede ederede mgbasa ozi gị maka gị, n'oge na-adịbeghị anya na-enye gị ihe niile ịchọrọ iji nyochaa, dezie, kwado, ịtọọ oge, ma bipụta ìgwè nke mgbasa ozi mgbasa ozi gafee ọwa gị niile. Y’oburu n’ibu oru gi maka ahia ahia nke ndi mmadu maka otutu mpaghara, udiri ahia na ngwa ahia ya mere ihe omuma ndi nne na nna anyi mere ka odi nfe ijikwa ihe nile n’otu ebe.
Azụmahịa na-ere - Ozugbo usoro mgbasa ozi mgbasa ozi gị na-aga nke ọma, nzọụkwụ ọzọ bụ iweta ndị isi gị na ndị otu ahịa gị na mmemme gị iji gbasaa ọnụnọ gị na ozi gị n'ahịa. Oge na-adịbeghị anya na-ere ihe ngwọta na-eme ka ọkwa mgbasa ozi ọhaneze na-adị mgbe niile na ozi ma na-ahapụ ndị ọrụ ka ha tinye ọkwa mgbasa ozi mgbasa ozi akwadoro gafee ọwa ha. Ma ọ bụ, ị nwere ike iji nke anyị akaụntụ nne na nna iji biputa ihe omuma ihe di iche iche n'aha ndi oru gi ka ha ghara ibuli mkpisi aka.
Nchịkọta Mgbasa Ozi - Ọdịnaya bụ eze nwanyị na ogo nke mgbasa ozi mmekọrịta ọ bụla metụtara. N'oge na-adịbeghị anya, nchịkọta mgbasa ozi ọha na eze na-amụ banyere iru na njikọ nke usoro mgbasa ozi ọhaneze ọ bụla ma nye gị ndụmọdụ ka ị tinye ụkpụrụ nduzi gị.
Anyị na-eji n'oge na-adịbeghị anya iji kọwaa, gbasasịa, nwalee, ma nakọta nzaghachi na ọba akwụkwọ vidio anyị ma hụ nnukwu myirịta dị n'etiti ihe Lately AI na-emepụta dị ka "oge pụrụ iche" vs. ihe ndị otu anyị ga-ahọrọ. Oge na-adịbeghị anya inwe ike ịmụta na iji mata ihe dị mkpa maka mgbasa ozi mmekọrịta dị oke mkpa maka onye ọ bụla chọrọ ịbawanye ọdịnaya ha.
N'oge na-adịbeghị anya, usoro ọgụgụ isi nke artificial na-amụta mgbe niile site na mgbasa ozi mgbasa ozi gị n'oge gara aga ma na-ewulite ihe odide dabere na ihe kachasị amasị ndị na-ege gị ntị. Ndị ahịa na-ahụ ezigbo nsonazụ nsonaazụ… tinyere mmụba nke 12,000%, ntinye 245% karịa, yana 200% na-eduga.
Rịọ ngosi ngosi
Tags: ai ọdịnaya onye so deeai software ide ederedeai n'elu ikpo okwuAmamịghe echicheautogenerate ọdịnayagbanye akpaaka mgbasa ozimachiini mmadun'oge na-adịbeghị anyausoro ọgụgụ isi nke mmekọrịta mmadụ na ibe yanchịkọta mmadụ mgbasa ozina-elekọta mmadụ na-ere